Ny Sanda Ara-Olon’ny Fandrosoana Any India · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Desambra 2013 15:15 GMT
Tamin'ny ady farany nataon'ny vahoakan'i Jagatsinghapur mba hiarovana ny fonenany sy ny antom-pivelomany manoloana ny fandrosoana dia nolavin'ny governemanta indiana ao an-toerana sy Korea Atsimo izay mihevitra ny hanangana ozinina lehibe iray fanamboarana vy (acier) eo amin'io toerana io ilay filazana lehibe nataon'ny Firenena Mikambana mba hanajanonana ilay tetikasa fangalàna tany.
Efa notoherin'ny mponin'i Jagatsinghapur, tanàna iray sy fari-piadidiana iray ao amin'ny distrikan'i Jagatsinghpur ao amin'ny fanjakan'i Odisha any India, ny tetikasa POSCO, tetikasa iray hananganana ozinina fanamboarana vy izay mitentina hatrany amin'ny 12 lavitrisa dolara Amerikana efa ho valo taona izay. Tamin'ny 2005 dia nanao sonia fifanarahana momba io tetikasa io ny governemantan'i Odisha sy ny orinasa Koreana lehibe POSCO ary mila tany midadasika 4.004 acres ka ny 2.900 acres dia misy ala ary ny ambiny kosa tanin'olona.
Saingy angatahin'ireo mponina ao an-toerana izay niaina teo efa am-polo taona maro ny zo hampiasa io tany misy ala izay kasain'ilay tetikasa ampiasaina io.
Takelaka lehibe iray any ivelan'ny tanànan'i Bailatutha. Ataon'ny mpitandro filaminana toby hanaraha-maso ireo olona mivezivezy manodidina io toerana io ilay toerana fiandrasana fiara fitateram-bahoaka ao an-damosiny. Sary avy amin'i Ayush Ranka. Fizakàmanana Demotix (22/7/2011)
Raha toa ka tanteraka io tetikasa io, olona maherin'ny 22.000 no mety ho voaroaka noho ny fahazoana ilay tany, ary dia ho rava manaraka izany koa ny firoborobon'ny toe-karena izay miankina amin'ny fambolena ravinà betel sy hazo fangalàna voa fanaovana menaka (cajou) ary ny jono.
Tamin'ny 7 Oktobra 2013, nambaran'ny Repoblikan'i Korea sy governemantan'i Odisha miaraka fa tokony hatomboka amin'ny 2014 ny asa eo amin'ilay toerana efa noheverina, na dia eo aza ilay takelaka lehibe misy ny filazan'ireo Mpiaro ny Zon'Olombelona ao amin'ny Firenena Mikambana izay milaza fa ny fanatontosana io tetikasa io dia midika ho famindràna toerana olona an'arivony sy fanakorontanana ny foto-piveloman'izy ireo.
Izao no nolazain'i Terra Lawson-Remer, mpampianatra mpanampy ao amin'ny The New School ( Sekoly Vaovao) sady Mpikambana ao amin'ny Mpanolotsainana'ny Fifandraisana amin'ny Vahiny, ao amin'ny bilaogy Kracktivism tamin'ny fanadihadiana ilay toe-draharaha :
ny fihenjanana misy eo amin'ny firoboroboan'ny toe-karena sy ny zon'ny fananan-tanin'ireo vondrona marefo dia fanamby ho an'ny fandrosoana efa an-taona maro. Mazàna ny firoborobon'ny fahazoana tany vatsian'ny mpanambola vahiny dia manery ireo olona efa nivelona teo hiala ary tsy miraharaha ny fangatahan'izy ireo momba ny zon'izy ireo amin'ny fananan-tany, manamafy ny tsy fitoniana sy fahazoana antoka momba ny fananan-tany sy mandany ireo zava-tsoa – na dia hoe hitondra firoboroboan'ny toe-karena faobe aza.
Vavy antitra iray ao amin'ny toby vonjimaikan'ny POSCO India. Niaritra noho ny fahamaroan'ny olona sy ny tsy fahalavorarian'ny fepetra iainana, 20 Rs (50cents) isan'olona isan'andro fotsiny ny vola ivelomana nandritra ny efa-taona. Sary avy amin'i AYush Ranka. Copyright Demotix (22/6/2011)
Voasakan'ny fahataràna anefa ilay foto-drafitrasa hatramin'ny niforonany. Efa nahazo ampahan-tany betsaka ny fanjakana, fa ny asa fanorenana no voasakan'ny ara-dalàna sy ny fandavan'ny olona ny tetikasa hikapàna ny hazo amin'ny velaran-tany efa mihoatra ny 1.600 hektara.
Niteraka fifanoherana, tsy teo amin'ny mponina eo an-toerana sy ny tontolo iainana ihany, fa teo amin'ny fomba fiatrehan'ny mpitandro filaminana ireo mpanao hetsi-panoherana manohitra ny fananganana ilay ozinina ihany koa ilay tetikasa.
Marobe ny hetsika efa nisy fa ilay iray farany tamin'ny volana Marsa 2013 no namoizana ainà mpikatroka mafàna fo tsy tia POSCO efatra rehefa nipoaka ilay baomba natsipy teny amin-dry zareo, araka ny fitantaran'i Subhash Gatade ao amin'ny bilaogy Kafila. Tsy avy hatrany dia nandray ny andraikiny anefa ny mpitandro filaminana hamaliana ilay herisetra.
Ireto avy no zavatra hizingizinin'ny mpitokona :
1. Hajanona avy hatrany ny fanagiazana tany ho an'ny ozinina POSCO misy amin'izao fotoana izao.
2. Esorina avy hatrany amin'ny faritra natokana ho an'ny ozinina POSCO ny mpitandro filaminana.
3. Atsahatra amin'ny asany avy hatrany aloha ny Mpanangona hetra eo amin'ny distrika sy ny lehiben'ny mpitandro filaminana ao amin'ny distrikan'i Jagatsinghpur.
4. Atsahatra avy hatrany ny fanamelohana tsy marina atao amin'ny mpanao fihetsiketsehana.
Fa raha mbola nihizingizina ilay tetikasa fanorenana ozinina fanamboarana vy, ny Video Volunteers, haino aman-jerinà ONG iray iraisam-pirenena sy mpiaro ny zon'olombelona kosa dia nanatontosa sarimihetsika fanadihadiana izay manasongadina ny fijoroana vavolombelon'ireo mponina amin'ny filazàna ny fahavoazan'ny fitadiavany isan'andro :
Nataon'ireo vondron'ireo mpifanerasera amin'ny Video Volunteers nandritra ilay iraka fanangonam-baovao notarihan'nireo mpikambana sasany ao amin'ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona tamin'ny Novambra 2012 ity fanadihadiana ity. Natao tao anatinà tatitra (pdf) mitondra ny lohateny hoe ” Ny Vidin'ny vy Acier” ihany koa ny vokatr'ilay angom-baovao.
Avy ao amin'ny pejy YouTube an'ilay sarimihetsika
Tonga tamin'ny fotoana nilàna azy mihitsy ny zava-dehibe nasongadin'ilay sarimihetsika satria vao tafarina tamin'ny fandalovan'ilay rivodoza Phailin ilay faritra. Maneho ny ahiahiny ny mponina fa ny fikapàna ny hazo 170.000 nataon'ny POSCO sy ny Governemantan'i Odisha no tena mahatonga azy ireo ho osa noho ny fandalovan'ny rivodoza. Tamin'ireo taona maro tany aloha dia nanalefaka ny herin'ny rivo-doza ny fisian'ny ala.[..]
“Iharan'ny herisetra, faneriterena, fandrahonana, ary fitànana am-ponja vonjimaika sy fanamelohana tsy marina noho ny fiaraha-mientan'izy ireo am-pilaminana hiaro ny zony ireo mponina ao amin'ilay faritra voakasik'ilay tetikasa ” hoy i Maina Kiai, mpitondra teny manokan'ny Firenena Mikambana momba ny fahalalahana manao fivoriana amim-pilaminana.
Maro amin'ny mpitondra tenin'ny Firenena Mikambana no nanome ny heviny, mitaky ny hanajanonana ilay tetikasa :
Tsy nandeha araka ny niheverana azy ny fananganana ilay ozinina fanamboarana vy acier sy ny seranana any Odisha any India ataon'ny orinasa goavana Posco avy any Korea Atsimo raha tsy misy fanomezana antoka fa harovana sy hajaina ny zon'ireo olona an'arivony.
Ny toby vonjimaikan'ny POSCO, India izay naorina ho an'ireo mponina vitsivitsy antsoina hoe “Pro-POSCO” – “mpankasitraka ny POSCO”. Sary avy amin'i Ayush Ranka . Fizakàmanana Demotix (22/7/2011)
Taterin'ny bilaogy Chai Kadai fa i Debendra Swain, mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahaminona IndiaUnheard izay tsy tia POSCO no nanao ny sasany amin'ireny lahatsary ireny:
Nosamborin'ny mpitandro filaminana noho ny fanamelohana tsy marina izy ny faha-3 Febroary 2013, dia nafahana rehefa nahaloa vola tamin'ny 01 Martsa 2013 taorian'ny nitànana am-ponja azy 26 andro tany amin'ny fonjan'i Kujang.
Etsy andanin'izany, nolavin'ny POSCO India mafy fa tsy misy andraikiny amin'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona :
Nanentana hatrany ny governemantan'i Odisha mba hiaro ny zon'olombelona sy ny foto-piveloman'ireo tsy manan-tsiny ary hitsipaka/ hanameloka ireo herisetra tsy ara-dalàna rehetra mihatra amin'izy ireo ny Posco.
Hitanao ao amin'ny tranonkalan'ny Stop POSCO campaign sy ny Video Volunteers ny fanampim-baovao misimisy kokoa.